नाकाबन्दीका विच भएकाे त्याे विवाह - भीम उपाध्याय - Supa Online
नाकाबन्दीका विच भएकाे त्याे विवाह – भीम उपाध्याय
२०७७ मंसिर ८, सोमबार १०:०९
२०४६ को मंसिर ८ गतेको भारतको नाकाबन्दीबीच सामाजिक अभियन्ता भीम उपाध्यायकाे विवाह भएकाे बताउदै उपाध्याय यसरी सम्झन्छन्, विवाह भएकाे दिन,
नेपाल माथि भारतको कडा नाकाबन्दी चलिरहेको थियो। त्यसबेला गाडी चलाउन सहजै ईन्धन तेल पाईदैन थियो। भैरहवाबाट ललितपुर जन्ति जान मुस्किलले सोर्सफोर्स लगाएर साथीको एउटा पूरानो बस र ईन्धनको जोहो भयो। मंसिर ८ गते बिहान८ बजे काठमाण्डौँका लागि भैरहवाबाट जन्ति हिड्यो। नेपाली चलन अनुसार नै पंचेबाजा बजाउने टोली पनि भैरहवाबाट संगै लिएर आएका थियौँ।
हाम्रो बस पूरानो थियो। नारायणगढ आउदा जन्ति बस नै बिग्रियो, जति मर्मत गर्न खोजे पनि सुचारू हुन सकेन। एकदम तनाव भयो, अर्को बस पनि नाकाबन्दीको असरले पाउन मुस्किल थियो। यता विहेको साईत गुज्रदै थियो। वधुका बाआमा, हजुरबा आमा सबै भोकभोकै थिए, कन्यादान भएपछि मात्र खाने भनेर जन्ति कुर्दै बसेका थिए। फोन गर्न सजिलो थिएन, फोन पनि सबैसंग हुने गर्दैनथ्यो र थिएन त्यो बेला । एक जना छिमेकीको फोनलाई सम्पर्क बनाएर काम चलाइयो। अन्योलमा जन्ति कुर्दै हुनेवाला ससुराली चिन्तित थिए।
अब कसरी काठमाण्डौँ पुग्ने? अब बस नपाएर विहे नै स्थगित हुने त हैन भन्ने चिन्ता हुन थाल्यो। दुबै पक्षको सारा तयारी बेकार हुने त होईन? मैले नै निर्णय गर्नुथियो।
कुनै उपाय चलेन, मेरा प्रभावशीली चिनजानका ब्यक्ति कोही पनि थिएनन् यात्रा ब्यवस्थापनका लागि।
मैले तुरून्त निर्णय लिएँ- म र मेरा केही निकटका नातेदार र साथीमात्र अब जन्ति जाने, म त जसरी पनि पुग्नै पर्छ, म पुगेँपछि अरू कोही नभए पनि विवाह प्रकृया पूरा हुन्छ। पंन्चेबाजा अब नलैजाने, भैरहवा फिर्ता पठाउने। अब बिनाबाजाको जन्ति हुने अवस्था भयो।
त्यति बेलै आधा भरिएको काठमाण्डौँ जाने ईसुजु साझा बस १ बजे तिर आईपुग्यो। त्यही साझा बसमा चढेर जति जना सकिन्छ जन्तिमा जाने भईयो। सायद १०,१५ जना मात्र चढियो होला कोचाकोच गरेर, बिना बाजाको जन्ति !
विवाहको पहिलो मूर्हुर्त साइत कटिसकेको थियो। हामी साझा बसबाट पुल्चोकमा ओर्लियौँ, करिब साझ ६ बजेको थियो होला। त्यहॉबाट सातदोबाटो लगनखेलसम्म जन्ति जानुथियो। लगनखेलसम्म ट्याक्सी चढेर आयौँ ।
काठमाण्डौँका ५,६ जना साथीहरूले यहॉ ब्याण्ड बाजा खोजेर ल्याउदा बेलुका ८ बजिसकेको थियो। भैरहवाका १५ जना र यहॉका ६,७ जना साथीहरू मात्र ब्याण्ड बाजासहित जन्ति गईयो। पंचेबाजाको चाहना पूरा हुन नसके पनि ब्याण्डबाजाले जन्तिको महत्व बढाएको थियो। बाजाबिनाको जन्तिको खिसिटिउरीबाट भाग्यले जोगियौँ । रातभरि विवाह क्रम चल्यो, विहानपख अन्माउने काम थियो। तर अब फर्कने कसरी हो बस नै पाउन गाह्रो भएको थियो।
साथीहरू बस खोज्न गए। बल्ल बल्ल अर्को आधा भरिएको बस भेटियो। दुलाहा दुलही पनि सामान्य बसमा नै कोचिएर जन्ति फर्कन बाध्य भएको थियो।
दुलादुलहीका लागि कमसे कम छुट्टै ट्याक्सी भाडामा लिन जोड हुन थाल्यो। मैले जन्तिसंगै आयौँ, फर्कदा नछुट्टिऔँ सबै बसमानै जाऔँ भनेर निर्णय लिएँ। ससुराली तर्फकाले मेरो निर्णयमा खुशी नमानेको मैले बुझिरहेको थिएँ। बिहान ७ बजे जन्ति फर्क्यो, हिड्यो। जन्ति यात्रु बसमानै फर्कियौँ ।
नारायणघाट मुग्लिंग बीचमा हाम्रो जन्ति बस पनि फेरि बिग्रियो। म त ठिकै थिएँ, नयॉ दुलहीको चिन जानको कोही थिएनन्, विवाहको पहिरनमा कता जानु के गर्नु भईरहेको थियो। २ घंटा सडकमा बसेपछि बल्ल ठोकठाक गरेर बस चल्यो। नाकाबन्दीले होटेल र पसलहरू जताजतै बन्द थिए। सडकमा गाडी विरलै चल्थ्यो। गाडी बिग्रेपछि अर्को बिकल्प नै पाईदैन थियो। मेकानिक्सको पसल पनि बन्द हुन्थे।
गाडी नारायणघाट पुग्यो र खाना खाने ठाउको खोजी गर्न थालियो। एउटा सानो चिया पसल खुलेको रहेछ, चिया र चाउ चाउ पकाउन लगाएर बल्लतल्ल दुलही, आफू र जन्तिलाई खुवाईयो। गाडी चालकले गाडी मर्मत गराउन लग्यो। २ घंटा पछि गाडी बनेर आएपछि जन्ति भोकभोकै भैरहवा फर्कियौँ।
घर पुग्दा रातिको ८ बजेको थियो। दुलही भित्राउने, मूख हेर्ने, मानो भर्ने कामहरू सकिएर बल्ल खाना खायौँ। राति १२ बजिसकेको थियो। भोलि बिहान मंसिर ९ गते दुलाहा दुलहीबीच केही पूजा हुदोरहेछ त्यो पूरा गरियो। त्यही दिन बेलुका घर प्रागंणमा रात्री बिहे भोज पनि थियो।
भोज सकिदा रातिको १२ बजिसकेको थियो। विवाह गर्ने कामले जागिरको कार्यस्थल डोटी फर्कन ढिला हुदै थियो। दशै सुरू हुनअघि आएको मान्छे मंसीरको आधासम्म लामो अवधि अफिसमा रहेको थिइनँ। हतार हतार विहे सकेर हामी नवदम्पत्ति नेपालगंज पुगेर प्लेन चढेर दिपायल डोटी फर्कियौँ।
डोटीका सहकर्मी साथीहरूले हामी नवदुलाहा दुलहीलाई अकस्मात देख्दा छक्क परेका थिए।